MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA LO'DA AUSTRALIA - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Lo'da Australia
Max Blue Heeler wuxuu jecel yahay inuu riyaha dhaqdo. Ma jiri doonaan roogayaal rogaya oo Max ku wareegsan waa inay dhammaantood ku wada jiraan koox weyn. Haddii kale, Max wuxuu ku xalliyaa 'dhibaatada' daqiiqado gudahood!
Liiska eyda lo'da ah ee lo'da ah ee loo yaqaan 'Ecu Dog Mix'
Eyga lo'da Australia
Eyga Ustaraaliya ee loo yaqaan 'Australian Cattle Dog', oo sidoo kale loo yaqaan Australian Heeler, Hall's Heeler, Queensland Heeler iyo Blue Heeler, waa eey geesi ah, daallan, adag, is haysta. Eeygu waa kacsan yahay, si wanaagsan ayuu u muruqsan yahay, awood badan yahay oo go'aan qaadanayaa inta uu shaqeynayo. Dhererka jirku waxyar ayuu ka dheer yahay inta uu dheer yahay. Dabada ayaa loo hayaa si dhexdhexaad ah, iyadoo sudhan qalooc yar. Lugaha hore waa toosan yihiin, xoogan yihiin, laf wareegayaan, cagaha gaadhaya. Cagaha waa wareegsan yihiin, suulashana waa gaaban yihiin. Qalfoofku waa mid ballaadhan oo xoogaa qalooca inta u dhexeysa dhegaha, oo u jajabinaya joogsi yar laakiin sugan. Dheguhu way kala fidsan yihiin, cabbirkoodu waa dhexdhexaad yahay waana la feejiganyahay markay feejignaadaan Sanku waa madowyahay. Madowga mugdiga ah, indhaha dhexdhexaadka ahi waa qaab muuqaal ah. Ilkaha waa in ay ku kulmaan qaniinyada maqaska, iyada oo gunta hoose ay xirayaan oo kaliya taabanayaan kore. ACD waxay leedahay jaakad laba jibbaaran oo jilicsan oo gaaban. Midabada Coat-ka waxaa ka mid ah dhibicyo guduudan, buluug, buluug leh ama midab buluug leh ama leh sumado kale. Eeyaha leh midabada midabada leh ee casaanka ah waxaa loo yaqaan Red Heelers halka eeyaha leh midabka buluuga ah waxaa loo yaqaan Blue Heelers. Calaamadaha madow looma baahna giraanta showga. Eydu waxay ku dhashaan caddaan hiddo-wadaha ay ka dhaxleen iskutallaabtii hore ee Dalmatian. Mararka qaarkood waad u sheegi kartaa midabka qaangaarka adigoo fiirinaya suufka suufka.
bichon frize poodle qas madow
Eyga Ustaraaliya waa aamin, geesi, hawlkar, cawska xoolaha . Mid ka mid ah noocyada ugu caqliga badan, ma ahan nooca eeyga inuu jiifo qolka fadhiga maalintii oo dhan ama uu si farxad leh ugu noolaado barxadda guriga isagoo kaliya soconaya 15-daqiiqo. Waxay ubaahantahay jimicsi intaa kabadan intaas iyo wax ay mashquuliso maskaxdeeda maalin kasta ama way caajisi doontaa, taasoo horseedaysa dhibaatooyinka dhaqanka daran . Waxay ubaahantahay waxqabad nolosheeda waxayna kufiicantahay shaqo. Eygan digniinta ah ayaa aad ugu fiican giraanta addeecidda wuxuuna ku fiicnaan doonaa isku-buuqsanaanta iyo tijaabooyinka daaqsinta. Waxay noqon kartaa adeecid loo tababaray heer aad u sareeya. Tababar adag oo bilaabmaya marka eeygu eey yahay oo wax badan oo ka mid ah hoggaanka maalinlaha ah , oo ay weheliso maalinle jimicsi maskaxeed iyo mid jireed waxay soo saari doontaa xayawaan raaxo leh oo farxad leh. Difaac, waxay ka dhigeysaa mid aad u fiican ilaaliyaha eyga . Gabi ahaanba waa mid daacad ah oo adeeca sayidkeeda. Waxay mararka qaar ka shakisaa dadka iyo eeyaha aysan aqoon. Waxay noqon kartaa eey aad u dagaal badan haddii loo oggolaado inuu noqdo hoggaamiye xirmo, maxaa yeelay heerkiisa xukunku wuu sarreeyaa. Bar Eygaaga Australiyaanka ah ee Cattle in aad tahay alfa mana u dulqaadan doontid inuu la dagaallamo eeyaha kale. Eyda Lo'da oo si wanaagsan isu dheellitiran ayaa carruurta ku wanaagsan oo lagu aamini karo Qaarkood waxay fiirin doonaan ciribta dadka iyaga oo isku dayaya inay iyaga raacaan milkiilaha ayaa u baahan inuu u sheego eyga taas oo ah dhaqan aan la aqbali karin. Haddii aad korsato xayawaan, iska ilaali khadadka shaqada, maxaa yeelay eeyahaani waxay noqon karaan kuwo firfircoon oo xoog leh nolosha guriga. Eeyaha Lo'da Australia aad ayey u badan yihiin tababar fudud . Dhibaatooyinka wayna Kici karaan mulkiilayaasha khafiifka ah iyo / ama milkiilayaasha aan bixin qadarka iyo nooca jimicsiga. Noocani wuxuu ugu fiican yahay shaqo la qabto. Haddii aadan haysan waqti aad si ballaaran ula shaqeysid oo aad jimicsi ugu sameysid eeygaaga, ama aadan si buuxda u fahmin dareen canine iyo baahidooda ah inay yeeshaan hoggaan, kani ma aha idinkoo cows ah.
Dhererka: Ragga 17 - 20 inji (43 - 51 cm) Dumarka 17 - 19 inji (43 - 48 cm)
Miisaanka: 30 - 62 rodol (13 - 28 kg)
Ku soo dhowaanshaha sinta dysplasia iyo PRA. Eeyaha midabkoodu midabkiisu yahay mid u nugul dhagaha.
Laguma talin nolosha guriga oo wuxuu ku fiican yahay ugu yaraan deyr weyn. Shaqada ugu fiican ayey ku qabataa.
Xayawaankani waxay leeyihiin taag adag oo waxay ku raaxeysan doonaan dhammaan howlaha aad siin karto. Jimicsigu waa muhiimad aad u weyn — iyadoo aan ku filnayn ayay noqon karaan caajis iyo halaag . Jimicsigu si fudud kubad ugama tuuri karo. In kasta oo ay ku raaxeysan doonaan cayaartan kubbadda, maskaxdooda ayaa u baahan in la kiciyo maalin kasta. Shaqo ugu fiican. Waxay u baahan yihiin in la qaato socod dheer maalinle ah . Waxay ka dhigtaa saaxiibka orodka badan. Ha u oggolaan eeygan inuu hortaada ku socdo socodka. Wuxuu ubaahan yahay inuu ag joogo ama kaa dambeeyo si uu dib ugu dhaqangeliyo aadanaha waa alpha.
1 ilaa 7, celcelis ahaan 5 eeyo
somali bulldog pitbull iskudhaaf sawiro
Jaakada gaagaaban, cimilada u adkaysta waxay u baahan tahay daryeel yar waana mid aad u fudud in la xannaaneeyo. Kaliya shanlee oo ku caday burush adag, oo maydh kaliya marka loo baahdo. Noocani wuxuu u eg yahay inuu daadiyo jaakadiisa hal mar ama laba jeer sanadkii (taas oo kuxiran xaalada galmada iyo gobolka).
Eeyda deganeyaasha ay ka keeneen Yurub, ee loo yaqaan Smithfield iyo Old Smooth Collie (oo aan ahayn Smooth Collie oo maanta loo yaqaan), ma aysan awoodin inay la tacaalaan masaafada dheer iyo cimilada aan loo dulqaadan karin ee qaaradda cusub. Eyga Ustaraaliya ee loo yaqaan 'Cattle Dog' waxaa soo saaray deggeneyaal hormuud ah sannadihii 1800-meeyadii iyagoo ka tallaabay Dingo-bul merle Collies Dalmatians iyo madow iyo tan Kelpies . Ilo wareedyada qaar ayaa sheegaya Dibi Dibi nooc ayaa laga yaabaa in lagu daray sidoo kale. Natiijadu waxay noqotay eyda oo ahaa shaqaale aad u fiican, oo lo 'ku raacayay meelaha waaweyn. Eeyadu si aamusnaan ah ayey weli uga shaqeynayeen alaabada si xoog ah, iyagoo raba oo awood u leh inay xoolo ka kaxeeyaan masaafo aad u fara badan oo ay ku jiraan xaalado qalafsan oo kulul. Iyada oo leh awood sare, waxay si fiican ugu habbooneyd Queensland. Labada dareen ee ilaalinteeda iyo dhaqashadooduba aad ayey u xoogan yihiin. 1893 nin la yiraahdo Robert Kaleski ayaa qoray jaangooyo ku saabsan nooca. Sannadkii 1903 ayaa heerka laga ansixiyey Australia. 1980-kii taranka waxaa si buuxda u aqoonsaday AKC. Eyga Ustaraaliya ee loo yaqaan 'Australian Cattle Dog' waxaa sidoo kale loo yaqaanay Australian Heeler, Hall's Heeler, Queensland Heeler iyo Blue Heeler. 'Heeler' waxaa loola jeedaa xirfadeeda dhaqashada ee ah qabsashada iyo qaniinta ciribta lo'da. Awooddeeda ayaa dib u soo ceshan, raadin, ilaalin, firfircoonaan, adeecid tartan iyo qabashada tabaha.
ARF - Aasaaska Cilmi-baarista Xayawaanka
Layla the Red Heeler oo 13 jir ah
Kani waa Griffin Red Heeler qaabkiisa caadiga ah ee raha.
Ozzie Eyga Ustaraaliya
bichon iyo cavalier king charles isku qas
'Kani waa Dekota, Ey Australian Lo' ah oo jira 3 sano. Iyadu waa dhaga la 'oo aan wax maqli karin , laakiin iyadu aad ayey u faraxsan tahay oo si fudud ku socoto. Uma oggolaaneyso dhago la’aanteeda inay joojiso. Dekota iyo anigu waxaan kamid nahay kooxda K9 Raadinta iyo Samatabbixinta. Waxay jeceshahay carruurta, iyaga siiya dhunkasho iyo la ciyaar.
Labadan Aussies waxay ka yimaadeen Australia. Eeyaha Lo'da Australiyaanka ah ee Australiyaanka ah waxay umuuqdaan wax yar oo ka duwan nooca Mareykanka ee nooca.
lhasa apso iyo iskudhafka schnauzer
'Tani waa Fancy. Waxay jeceshahay inay mashquul ku ahaato ka shaqaynta fardaha. Mid ka mid ah waxyaabaha loo yaqaan 'Blue Heelers' waa jacaylka ay u qabaan shaqo ay qabtaan. Waxay leeyihiin adkeyn weyn taas oo ka dhigaysa iyaga u fiican eeyaha xoolaha. Marnaba igama quusato, taasi waa hubaal. Kama dooran doono nooc kale oo iyada ah. Waxay iiga caawisaa goobta xoolaha waxayna ku fiican tahay awooweyaasha. Waxaa laga yaabaa inay ku dhalatay uun Blue Heeler laakiin Fancy waa magaceeda. '
Cloey Eyga Cowska casaanka ee Casaanka ah (Red Heeler) oo ah eey yar oo 8 toddobaad jir ah— 'Tani waa Cloey. Iyadu waa sideed toddobaad jir ah Red Heeler eey. Aad ayey u firfircoon tahay oo wey sarreysaa waxayna jeceshahay inay ciyaarto. Waxay u maleyneysaa inay iyadu wax badan ka weyntahay isla markaana ay ciyi doonto oo ay hor istaagi doonto eey kasta ha lahaadee cabirkiisu. Cloey waa eeyga walaalkay oo aan xanaaneyno inta uu shaqada joogo. Waxay lugeeysaa socod maalinle ah, inta lugeyneyso waxay iskudayeysaa inay horay usocoto oo ay jiifto meelo har leh, ama waxay iskudayeysaa inay iyadu socoto iyo eeyaha kale ee aan soconno.
Cloey Eyga Cowska casaanka ee Australia (Red Heeler) sida eey yar oo jira 8 toddobaad
'Dual waxay dhaaftay filashadaydii aan u qabay ACD. Wuxuu ku hayaa runta heerarka taranka marka ay timaado adkeysi. Eygan isma dhiibin! Waxaa lagu soo weeraray waxa aan aaminsanahay inuu ahaa coyotes xagaagii 2011. Waxa uu maqnaa 3 maalmood oo uu kaligiis soo wada muuqday. Wuxuu qabay nabarro waaweyn, nabarro waaweyn oo qaniinyo ah oo u dhigma muruqyada dhabarka lugtiisa midig iyo qoortiisa. Wuxuu maray 4 qalliin muddadii 2 bilood ahayd soo kabashad buuxda waxay qaadatay ilaa 3 bilood. Ilaa maantadan ma gaabin kartid. Wuxuu leeyahay awood dabiici ah oo aad u leh xoolo shaqee oo sifiican ayuu ulaqabtay. Weligay ma yeelan doono nooc kale oo eey ah. Wuu i ag joogaa marwalba wuuna ilaaliyaa ilaalintiisa laakiin kaliya markii loo baahdo. Haddii hooyadu qof u oggolaato guriga wuxuu ogyahay inay saaxiib yihiin. Waxaan ku amaaneynaa Dual meel kasta oo aan tagno! '
Markasta Eyga Lo'da Australiyaanka ah ee jira 1 sano
Dhab ahaan Eyga Ustaraaliya eey ey u yahay
Ladue the Red Heeler markay jiraan 6 bilood— 'Ladue waxay lamid tahay Blue Heeler marka laga reebo inay casaan tahay. Ladue wuxuu jecel yahay inuu ku ciyaaro eeyo kale . Waxay kaloo jeceshahay inay ku dabaalato biyahayga. Iyada iyo aniga Feedhyahan jeclahay inaan aado deriskeyga oo aan la ciyaaro / daaqo deriskeyga Soohdinta Collie . Waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaarto ee ay ugu jecel yihiin waa kubad, aniga iyo iyada had iyo jeer waanu ciyaarnaa kubbadda cagta. Iyadu waa dhakhso waxbarto oo runtii caqli badan. Waxaa la iga siiyay mulkiilaha meesha aan fardo fuusho. Waxay ku soo iibsadeen iyada oo ujeedadu tahay inay ahaato a adhijir , laakiin iyadu waa mid xishood badan oo wanaagsan. Haddii aan maalin tago oo aanan la ciyaarin Ladue way waalan doontaa! '
Eeg tusaalooyin dheeri ah ee Eyga Uurka Australiya
Sawirada Eyga Ustaraaliya 1
Sawirada Eyga Ustaraaliya 2
Sawirada Eyga Ustaraaliya 3
Sawirada Eyga Ustaraaliya 4
Sawirada Eyga Ustaraaliya 5
Sawirada Eeyaha Lo'da Australia 6
toy adhijir Australia saddex madow
isku dhafka sheybaarka jarmalka gaaban
jir ingiriis jir ah xadka collie mix
madow iyo brown eey chihuahua